Iindlela ezine ze-E-Commerce ekufuneka uzamkele | Martech Zone
Umzi mveliso we-e-commerce kulindeleke ukuba ukhule ngokuqhubekayo kule minyaka izayo. Ngenxa yenkqubela phambili yetekhnoloji kunye nokwahluka kukhetho lokuthenga kubathengi, kuya kuba nzima ukubamba iinqaba. Abathengisi abaxhotyiswe kakuhle ziindlela zamvanje kunye netekhnoloji baya kuba nempumelelo ngakumbi xa kuthelekiswa nabanye abathengisi. Ngokwengxelo evela StatistIngeniso ye-e-commerce yehlabathi iyakufikelela kwi-4.88 yezigidi zeedola ngo-2021. Yiyo ke loo nto unokucinga ukuba intengiso izakhawuleza kangakanani ukuvela kunye netekhnoloji kunye nezinto eziqhubekayo.
Impembelelo yesifo kubuRhwebo noRhwebo nge-E
Abathengisi baseMelika bakumkhondo wokuvala iivenkile ezingama-25,000 kulo nyaka njengobhubhane we-coronavirus inyusa imikhwa yokuthenga. Ingaphezulu kokuphindwe kabini iivenkile ezingama-9,832 ezivaliweyo ngo-2019, ngokweCoresight Research. Ukuza kuthi ga ngoku kulo nyaka imixokelelwane emikhulu yase-US ibhengeze ngaphezulu kokuvalwa ngokusisigxina okungama-5,000.
Kunye noloyiko lwendyikitya yokufa, ukutshixwa kwengingqi kukhawuleze ukutshintsha kwabathengi ukuze bathenge nge-Intanethi. Iinkampani ebezilungisiwe okanye zitshintshelwe ngokukhawuleza kwintengiso ye-Intanethi ziye zakhula ngokuhamba kwesifo. Kwaye akunakulindeleka ukuba olu tshintsho ekuziphatheni lutyibilike ngasemva njengoko iindawo zentengiso zivulekile kwakhona.
Makhe sijonge ezinye zeendlela ze-e-commerce ezivelayo ekufuneka uzilandele.
The Ingxelo ka-2018 yoRhwebo lweNgxelo yezoRhwebo ifumanise ukuba i-16.4% yeenkampani ze-ecommerce zisebenzisa ukuhambisa ngenqanawa kwiivenkile ezingama-450 ezikwi-intanethi. Ukuhambisa ngenqanawa yimodeli esebenzayo yeshishini ukunciphisa iindleko zoluhlu kunye nokunyusa inzuzo yakho. Amashishini anemali encinci ayangenelwa kule modeli. Ivenkile ye-Intanethi isebenza njengomphakathi phakathi komthengisi kunye nomthengi.
Ngamazwi alula, ukuthengisa kunye nokuthengisa kwenziwa nguwe ngelixa ukuthunyelwa kwenziwa ngokuthe ngqo ngabavelisi. Ke, ugcina imali kuthutho kunye nasekulawuleni uluhlu lwevenkile okanye iindleko zokuphatha.
Kule modeli, abathengisi abakwi-Intanethi banomngcipheko omncinci kunye neenzuzo ezingcono njengoko uza kuthenga imveliso kuphela emva kokuba umthengi ebeke iodolo. Kwakhona kunciphisa iindleko eziphezulu. Abathengisi be-E-commerce abasele besebenzisa le ndlela kwaye benza impumelelo enkulu yiDepho yasekhaya, iMacy's kunye nezinye ezimbalwa.
Ishishini elikwi-intanethi elisebenzisa amava okuhambisa ngenqanawe ukukhula okuphakathi kwemali eyi-32.7% kwaye inezinga lokuguqula eliyi-1.74% ngo-2018.
I-intanethi ifikeleleka ngokulula kuninzi lwehlabathi, kodwa abathengi basebenzisa iindlela ezininzi ukuthenga. Ngapha koko, ngokuka Ingxelo yokuthenga i-Omnichannel, malunga neepesenti ezingama-87 zabathengi eUnited States Ungaxhunyiwe kwi-intanethi abathengi.
I-78% yabathengi bathe bathengile kwiAmazon
I-45% yabathengi ethengiweyo kwivenkile enophawu kwi-intanethi
Ngama-65% abathengi abathengwa kwivenkile ethengisa izitena nodaka
Iipesenti ezingama-34 zabathengi bathenga kwi-eBay
I-11% yabathengi bathenga nge-Facebook, ngamanye amaxesha babizwa ngokuba yi-f-commerce.
Ukujonga la manani, abathengi bayindawo yonke kwaye bakhetha ukufikelela kwiimveliso kumaqonga onke apho banokukufumana khona. Uncedo lokubakho kunye nokufikeleleka ngeendlela ezininzi zinokunyusa ishishini lakho ngengeniso enkulu. Baninzi abathengisi abakwi-intanethi abajikela ekuthengiseni amajelo amaninzi… nawe ngokunjalo.
Iziteshi ezidumileyo zibandakanya i-eBay, iAmazon, iGoogle Shopping, kunye neJet. Amajelo eendaba ezentlalo afana ne-Facebook, i-Instagram, kunye nePinterest nawo aguqula umhlaba we-e-commerce kunye neemfuno zawo ezikhulayo.
Ukuphuma okungaginyisi mathe
Isifundo esivela Baymard Institute ifumanise ukuba phantse iipesenti ezingama-70 zeenqwelo zokuthenga ziyalahlwa nge-29% yokulahlwa kusenzeka ngenxa yenkqubo yokuphuma enkulu. Umthengi wakho, obekulungele ngokupheleleyo ukuthenga, utshintshe ingqondo ngenxa yenkqubo (hayi ixabiso kunye nemveliso). Kunyaka ngamnye, abathengisi abaninzi baphulukana nabathengi ngenxa yenkqubo yokuthenga ende okanye exakekileyo.
Kwi-2019, abathengisi kulindeleke ukuba bayisingathe le meko kakuhle ngaphandle kokuphuma kunye namanyathelo entlawulo. Abathengisi abakwi-Intanethi baya kuthatha inyathelo eliya phambili ukuphucula inkqubo yabo yokuphuma ukuyenza ikhuseleke ngakumbi, ilula, kwaye ilungele abathengi bayo.
Ukuba unayo ivenkile ekwi-Intanethi ethengisa kumazwe aphesheya, kuyanceda ukuba nenketho yendawo ekuhlawula kuyo abathengi bakho behlabathi. Eyona ndlela ilungileyo kukudibanisa iintlawulo zakho zibe liqonga elinye, ukubonelela ngenkqubo yokuhlawula egudileyo kumthengi wakho kwihlabathi liphela.
Ukunyanga abathengi bakho sisitshixo sempumelelo kulo naliphi na ishishini. Kwihlabathi ledijithali, umthengi onelisekileyo sesona sicwangciso sisebenzayo sokuthengisa. Ukufumaneka kuwo onke amajelo akwanelanga, kuya kufuneka uqaphele abathengi bakho kwiqonga ngalinye kwaye ubanikeze unyango olukhethekileyo ngokusekwe kwimbali yabo yangaphambili kunye nawe.
Ukuba umthengi osandula ukundwendwela uphawu lwakho kuFacebook, umzekelo, undwendwela iwebhusayithi yakho, bonelela ngamava abathengi ngokusekwe kukudibana kwabo okokugqibela. Zeziphi iimveliso obuzibonisa? Ngowuphi umxholo ebenixoxa ngawo? Amava e-omni-channel angenamthungo aya kuqhuba uthethathethwano olukhulu kunye nokuguqulwa.
Ngokutsho kwesifundo se-Evergage, Kuphela yi-27% yabathengisi abahambisa isiqingatha okanye ngaphezulu kweendlela zabo. Kulo nyaka, uya kubona ukunyuka kweli nani njengoko abathengisi begxile ngakumbi ekujolise kuyo okuqhutywa yi-AI ukwamkela abathengi babo kumajelo ahlukeneyo. Le iya kuba yenye yezona zinto zidumileyo zorhwebo kwi-2019 ekufuneka uyamkele.
Ingcebiso enye yokugqibela ye-Ecommerce
Ezi zezona ndlela zine zihamba phambili ze-e-commerce ekufuneka zilandelwe kwiminyaka ezayo. Ukuhlala uhlaziyiwe kwitekhnoloji yeyona ndlela yokugcina ishishini lakho kwi-Intanethi likhula kwixesha elizayo. Ungasoloko uthatha inyathelo eliya phambili ngokuhlangabezana neemfuno zabathengi bakho. Qiniseka ukuba ujonga iindwendwe zakho ukuba uqhuba njani kwi-Intanethi. Ukuba nengxelo kwangexesha evela kubathengi abangahleliwe kunokukunika ukuqonda okukhulu kubume beshishini lakho kwimarike.
tags: AmazonIziko le-baymardBigCommerceInkqubo yokuphumaukuthumela ukuthumelaebayukuphuma kwe-ecommerceimikhwa ye-ecommerceukuthengisa izinto ezininziNgokwezifisoTwilley
Nceda ukhokele kwimvukelo yentengiso
Iindlela zokuThengisa ngeDijithali